CAriCaTuRE sKEtcH: 2008
..........Rolling Stones က guitar သမားပါ.....//
Posted by ATH at 7:43 PM0comments
...ကျနော့်ရဲ့Tevezကိုကြည့်ကြပါအုံး...ဘီလူးနဲ့တူမနေဘူးလားလို့....ကျနော်ကTevez ဆိုလိုက်ပြီး Tevezလိုက်
Posted by ATH at 4:39 AM 1 comments
......အင်္ဂလန်နဲ့မန်ယူ အုတ်တံတိုင်းကြီး ...//
Posted by ATH at 3:35 AM0comments
...... KORN က Guitarist ပါ....
........Eleven Journal မှာတွေ့လို့ဆွဲလိုက်တာ.../
...ကျနော်တို့တွေ ကလေးဘ၀ထဲက ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူပါ...
အဲ့ဒီတုန်းက ကျနော်တို့ရဲ့ Hero ကြီးပေါ့...ခုလည်း
RAMBO4ကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ........
Posted by ATH at 7:14 PM 1 comments
Posted by ATH at 3:22 AM 1 comments
Posted by ATH at 3:14 AM 1 comments
လေးဖြူ !!!!! လေးဖြူ !!!! လေးဖြူ !!!!!!
Posted by ATH at 7:25 PM 1 comments
...MAN U ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပါ...
ကျနော်လည်း MAN U ပရိတ်သတ်ပါ...
Posted by ATH at 3:36 AM0comments
ROLLING STONES က guitarist ကြီးပါ...
Posted by ATH at 3:22 AM0comments
...OBAMA ရေ ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျာ...
Posted by ATH at 5:43 AM0comments
ဒီငနဲက SYSTEM OF A DOWN ကvocalist...AlternativeMetal တွေဆိုတယ်လို့ကြားတယ်...
soldier side , boom, chop suey တွေကိုကြိုက်တယ်.....
Posted by ATH at 3:28 AM0comments
..ဒီဘဲကြီးကိုတော့ ခင်ဗျားတို့သိမှာပါ...ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဂစ်တာသမားတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်...
GUNS N ROSES BAND ရဲ့ ဂစ်တာသမား အကောင်းစားကြီးပေါ့...ခုတော့
VELVET REVOLVER မှာဒီဘဲကြီးရှိနေတယ်.....
Posted by ATH at 5:11 AM 1 comments
ကျနော့်အတွက်တော့ အရမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်တယ်...၀ါသနာပါတဲ့
အဆင်ပြေသွားမှာပါ...ကျနော်လည်း online ပေါ်က
ကယ်ရေကေချာsite တွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်...အဲ့ဒီက အပုံတွေကိုကူးဆွဲတယ်...
Posted by ATH at 9:34 PM0comments
koRn band က ဒီငနဲလေးရဲ့ Microphone stand ကထူးထူးဆန်ဆန်းလေး...
Posted by ATH at 8:41 PM0comments
LINKIN PARK ရဲ့ vocalist ...Chester BenningtoN လို့ခေါ်တယ်...
Posted by ATH at 8:20 PM 1 comments
ဒီငနဲက SLIPKNOT က drummer ပါ...ကျနော် SLIPKNOT ကိုအရမ်းခိုက်ပါတယ်...
Posted by ATH at 8:07 PM0comments
SLIPKNOT က guitarတီးတဲ့ငနဲပါ...
Posted by ATH at 6:13 AM0comments
....ဒီငနဲတွေက ခပ်ဆန်းဆန်းပဲ... အားလုံးမျက်နှာဖုံးတွေ ၀တ်ထားကြတယ်...
တို့လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်...Rap-Metal, Heavy Metal,Alternative Metalပေါ့... SLIPKNOT ပါ...
ဒီငနဲက Percussion တီးတယ်...
Posted by ATH at 5:36 AM0comments
လူကြောက်တတ်တဲ့ငနဲတကောင်..ဒီကောင်ကkorn ၀ိုင်းက vocalist...
metal/hardcore rock တွေဆိုတယ်...ကျနော်အကြိုက်ဆုံး band တွေ
Posted by ATH at 5:11 AM0comments
Marilyn Manson Band ကမျက်နှာဖြူပတ်ဖြူရော်နဲ့ ငနဲ ....
Posted by ATH at 6:07 AM 1 comments
ဒီငနဲက Alter bridge ရဲ့ leadဂစ်တာသမား
Posted by ATH at 5:38 AM0comments
Posted by ATH at 10:39 PM0comments
ကျနော့်သူငယ်ချင်း ကိုစိုင်း လက်အားပြီးဆွဲထားတဲ့အပုံ.. accessories ထဲက paint နဲ့ဆွဲ
Posted by ATH at 10:36 PM0comments
Posted by ATH at 10:33 PM0comments
Posted by ATH at 10:30 PM0comments
ကျနော့်သူငယ်ချင်း ကိုပြည့်စုံ ကိုသန့်ဇင်
Posted by ATH at 10:25 PM0comments
ကျနော့်ရဲ့ OLD FRIEND နေနေ
Posted by ATH at 10:22 PM 1 comments
...မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးတွေရဲ့အသဲစွဲ ရုပ်ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်..../
Posted by ATH at 10:08 PM 1 comments
Posted by ATH at 10:04 PM2comments